Ndichaita Sei IETT Nzvimbo Dzekugadzirwa Munguva Yemazuva Eid? | RayHaber | raillynews
[30 / 05 / 2020] Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Emergency Hospital Yakavhurwa	34 Istanbul
[29 / 05 / 2020] Trump: Isu Tinopedzisa Hukama Hwedu neWorld Health Organisation	coronavirus
[29 / 05 / 2020] Minister Akar Vaziviswa! Discharges Kutanga Kubva 31 Chivabvu	GENERAL
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulNdichaita Sei IETT Nzvimbo Dzekugadzirwa Munguva Yemazuva Eid?
Ndichaita Sei IETT Nzvimbo Dzekugadzirwa Munguva Yemazuva Eid?
22 / 05 / 2020 34 Istanbul, GENERAL, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Metrobus, TURKEY
Maitiro Ekuita IETT Expeditions pamazuva Emutambo
IETT icharamba ichitakura vapfuuri mukati mehoridhe. Pamazuva emabiko achaiswa nguva yekudzoka, vanenge vakatakura vanozotakurwa pamitsetse yebhazi maererano negwaro reMugovera nguva nemugovera uye nemamwe mazuva zvichienderana nenguva yeSvondo. Ese mabhazi gumi nemasere akapihwa kuzvipatara kwemazuva mana. MuMetrobus mutsara, ndege dzinoitwa mumaminetsi matatu mangwanani uye manheru.
Ndege dzinosvika makumi mapfumbamwe nemakumi manonwe nhatu kumahombekombe eEuropean neAnatolian achaenderera mberi panguva dzemabiko uye nemitambo. Izvo zvakarongedzwa kuronga ndege 498 nemotokari 608 nemugovera. NeSvondo, Muvhuro neChipiri, ndege zviuru mazana masere 13 dzichave dzakarongeka nemotokari makumi mana neshanu kunyange makumi mashanu nenomwe. Muchiitiko chekuti kune density mumitsetse, iyo density mumitsetse ine chekuita neyakasiya mota ichaderedzwa. Vagari veIstanbul vanogona kusarudza nzira uye mafambiro emigwagwa yebhazi yavanoda kushandisa. iett.gov.t ndiye inogona kusvika kubva.
IETTAkaita mabhasi ekugoverwa kuzvipatara kwemazuva 4 kuti aiswe nguva yekudzoka. Ese mabhazi gumi nemana anosvika gumi nemaviri akagoverwa kune veruzhinji, makumi maviri nenomwe, zvipatara makumi maviri neshanu muIstanbul mumazuva mana. Mabhazi anozonoshanda vashandi vepachipatara munzira kuenda uye nekubva kubasa.
Kubvisa Zororo Rekuzorora Kwakatanga Kubhadharwa ..! Saka mubhadharo uchaitwa sei?
Ndichaita Sei IETT Nhabvu Ive paSvondo?
Metro Istanbul's Night Trips Kutanga! .. Chengetedzo ichapihwa sei .. .. Usiku ...
IETT, Mutambo uyu waiva muMesa
Izmirim Card chii, Nzira Yokutenga, Inotora uye Inotsvaga Sei?
IETT Kutaurirana uye IETT Fonera Center Nhamba dzeNhamba
Mabheti eIETT Akashongedzwa nemaPosta eIETT Nhabvu Yechikwata
TCDD Yıldırım University yeBeyazıt Pamazuva Ekukurudzira
Haydarpaşa Railway Station Sales Record
Shanyira guta naSakbis pamazuva akanakisa ekupfeka
New Roadmap yeEngelsizmir muCorona Mazuva
Car Cinema muIstanbul Corona Mazuva Anogona Kuve Morale
418 Zviuru Matani Asphalt paMigwagwa yeIzmir muCorona Mazuva
Maitiro eIETT muKetfuko
EGO mabhazi achapa mahara basa kune vagari vanoregererwa kubva pakurambidzwa
Nhasi munhoroondo: 23 May 1933 ne Filyos-Eregli line
Injini Yekugadzira Inosimbiswa
Nhasi muNhoroondo: 31 May 1976 Arifiye-Sincan njanji nyowani uye Ayaş Tunaki
IMM Traic Ino Istanbul Mugwagwa uye Trafiki Mamiriro ezvinhu
Istanbul Road uye Traic
Izmir Karşıyaka Mugwagwa uye Trafiki Mamiriro Ezvinhu
İzmir Mugwagwa uye Trafiki Mamiriro ezvinhu
Mutsva IETT Mutsetse weAtatürk Airport Emergency Hospital
Chii chinonzi Gölbaşı Adıyaman Kahta Yekumhanya Yechikuru Yechitima?
Nzira yekutenga Ndege matikiti ane HES Code? Ko HES Code Inodikanwa Kune Vacheche Vanotakura?
Zvinozoita sei zvigaro zvekutsvagisa ndege?
Dzimba Dzepamhepo kuAirports Kugashira Epidemic Chitifiketi Kutanga musi wa 1 June
Freight Wagons Ianovhura Kune Nyika Kupfuura Asyaport
Kuwanikwa kweMahara kwehutano hweVashandi vehutano muKocaeli Yakawedzerwa kusvika 30 June
Gurukota Selçuk akatsanangura izvo nezve LGS Exam
Kuzivisa kweTender: Konkrete Traverse Kutsiva Basa paIrmak-Zongoldak Line
Iyo Social Security Institution (SGK) ichatora bvunzo dzekupinda mukirasi yeGeneral Administration Services uye makumi maviri emagariro Ekuchengetedza Nharaunda Nyanzvi kuti dzishandiswe muvashandi vepakati pesangano. Kupinda [More ...]
TÜBİTAK ichazorodze Vashandi vanoenderera mberi 9
Kusangana nenhengo dzevatapi venhau kuCentralical Maraş castle, Kahramanmaraş Metropolitan Municipality Meya Hayrettin Güngör akataura kuti vanhu vePrincipital Maraş castle, avo kutora nzvimbo kwakapera mushure memutambo weRamadan. [More ...]
80% yeKastamonu Cable Car Project Yapera
Cable Mota Inosvika kune Nhoroondo Maras castle
IMM Traffic Yazvino Istanbul Road uye Trafiki Mamiriro ezvinhu RAYHABER Inopa nzira dzakareruka uye mamiriro emigwagwa yaunogona kuenda nemepu yepamigwagwa. Istanbul pakati [More ...]
Ataköy İkitelli Metro Line Rail Welding Ceremony Yakagadziriswa muIstanbul
Kupro Railway Nhoroondo uye Mepu
Sezvinozivikanwa, ALTAY Main Battle Tank misa kugadzirwa chibvumirano chakasainwa pakati peDziviriro Viwanda Directorate (SSB) neBMC Zvimoto munaNovember 9, 2018. Pasi pechibvumirano chakasainwa [More ...]
Matsamba uye Zvibvumirano Zvinotanga Rini?
Denda re coronavirus, iro rakatanga kuChina uye rakabata nyika yese, rakanyanya kushanda munzira dzekuchengetedza hutsanana. Disinfection mashandiro munzvimbo dzakavharwa nekuda kwengozi yekusangana kusvibiswa [More ...]
LPG Yakanzwisisika Urban Legends
YHT Expeditions Kutanga Mushure meMitemo Idzva
IETT vols in Kizilcek
Metro uye Metrobus Expeditions muIstanbul 4-Zuva reMabiko Kudzora
Nzira yeku Tora HES Code kuburikidza neSMS? Ndekupi uye Sei Kuti Utore HES Code? Mazuva mangani iyo HES kodhi inoshanda?
Ungatenga Sei Matikiti eTreni ane HES Code? Nzira yeku Tora Hes Code? HES Code Kuenda kweMvumo…
Evhangeri kuneiyo! Rwendo rwe250 Rwendo Ruchawira Kuhafu Yeawa
Kutevera yechitatu bhiriji, ye3 yendege purojekiti ichavakwa muÇatalca uye Terkos.
Ko kushandiswa kweTCDD neKGM mahofisi kuchaitwa sei?